विचार / विश्लेषण भरतमोहनसँग बृद्ध सम्वाद : बृद्धावस्थामा म नै सम्पत्तीको मालिक हुँ भन्ने अहंम हुने रहेछ अव म राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन्न, बाँचुन्जेल सांसद हुने मन छ Wednesday,9Nov, 2016 2:01 PM
एमालेका वयोबृद्ध नेता भरतमोहन अधिकारी ८० वर्षको उमेरमा पनि सामाजिक काममा सक्रिय छन् । सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिएका अधिकारी संसद सदस्य छन् । मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अधिकारी अचेल बृद्धबृद्धाले राज्य, परिवारबाट पाउने सेवा र बृद्धबृद्धाका कर्तब्यवारे जनचेतना जगाउने अभियानमा छन् । पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा बृद्धभत्ता दिने कार्यक्रम सुरु गरेका अधिकारीले अस्ती भर्खरै विराटनगरमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा जेष्ठ नागकि महोत्सव गरेका थिए । ६० लामो राजनीतिक अनुभव संगालेका अधिकारीसँग उनको बृद्धावस्थाको जीवनशैली र बृद्धबृद्धाका समस्याबारे चक्रपथ डटकमका लागि कविता अधिकारीले गरेको कुराकानीः पार्टी राजनीतिबाट पुरै अलग हुनु भयो होइन त तपाईं ? मैले १६ बर्षको उमेरदेखी विद्यार्थी राजनीतिक सुरु गरेको हुँ । वनारसबाट राजनीति शुरु गरेँ । राजनीतिमा मेरो सहभागिता ६ दशक बितिसकेको छ । अहिले पनि मलाई पार्टीले समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनाएको छ तर, म पार्टी राजनीतिबाट रिटायर्ड भइसकेको छु । म पार्टीको साधारणसदस्य बाट पनि हटिसकेको छु । यो बीचमा मैले २००७ सालको राणा शासन झेलेँ, प्रजातन्त्र राजतन्त्र र लोकतन्त्र सबैको अनुभव मसँग छ । तर मैले १६ बर्षको उमेरदेखि राजनीतिमा लाग्दा जुन उद्धेश्य थियो त्यो चाँहि पूरा भएको छैन । के थियो तपाईको उद्धेश्य ? मेरो उदेश्य थियो देशलाई पुरै परिर्वतन गर्छु विकशित देश बनाउँछु भन्ने थियो । परिवर्तन त भयो तर, देश देखेर खुसी हुने ठाँउ अझै छैन । म कहिले काहिँ वेचैन पनि हुन्छु । किनभने ६ दशक सम्म लगानी गर्दा त्यो प्रतिफल पाइएन । हामी अझै पनि गरिब देशमा पर्छौं । हामीले धेरै राम्रा राम्रा काम गर्न सक्थ्यौ । हामी धनी देशका नेता बन्न सक्थ्यौं । नेपालको विकासमा परिर्वतन ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको नेता नेपालले पाएन त्यसमा मलाइ दुःख लाग्छ । अव राजनीतिक जीवनबाट रिटायर्ड भइसकेँ । मलाई अव पार्टीले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दिन्छ भन्ने छैन । अव मेरो लागि पार्टीले एउटै काम गरिदियोस् भन्ने इच्छा छ– म बाँचुन्जेल समानुपातिकबाट सांसद बनाइराखे म सकुन्जेल समाजसेवामा सक्रिय भई काम गर्ने थिएँ । मन्त्री भएका बेला आफैंले गर्नु भएको भए हुन्थ्यो नि, किन गर्न सक्नु भएन ? हो, पार्टीले मलाई तीनपटक सांसद, पाँच पटक मन्त्री बनायो । त्यसमा पनि म चार पटक त अर्थमन्त्री नै बनेँ । पार्टीले मलाई मन्त्री बनाउने भुमिका खेल्यो । त्यसमा म खुसी छु, पार्टीलाइ धन्यवाद छ । तर म जतिपटक मन्त्री बनेँ एकदमै छोटो समयका लागि मात्र । बढिमा ९ महिना घटिमा ४ महिनाको अवधीका लागि मन्त्री बनेँ । कि आफनो बजेट बनाएर पद छोडनु पर्ने कि अरुको बजेटमा काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो । मैले कहिल्यै पनि आफैंले ल्याएको बजेटमा काम गर्न पाइनँ । तर मैले मेरो छोटो समयमा पनि धेरै सम्झन लायक कामचाहिँ गरेको छु । त्यसमध्ये २०५१ सालमा ल्याएको आफनो गाउँ आफै बनाउँ, सामाजिक सुरक्षा, बृद्धाभत्ता लगायतका कार्यक्रम अहिले पनि लोकप्रिय छ ।
त्यसबेला बृद्ध–बृद्धालाई भत्ता दिने सोच तपाईंहरुको सरकारमा कसरी आयो ? मेरो पालमा देशमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । २००७ सालको परिर्वतन होस् या ४६ सालको अन्दोलन । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी बनेसँगै म अर्थमन्त्री भएँ । एमाले पहिलो पटक सरकारमा आएका बेला जनतालाई लाभ दिनुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले हामीले जनताका लागि कार्यक्रम बनाएको हो । त्यस भन्दा अगाडि पटक पटक नेपाली कांग्रेस सरकारमा गयो । उसले केही पनि राम्रा कार्यक्रम ल्याएन, काम गरेन । हामी सरकारमा हुँदा पनि कतिखेर गिरिजावावुले ढाल्ने हुन् भन्ने थियो । बाबु आमाले जन्म दिए, हुर्काए तिनलाई सन्तानले मायासम्मान दिन सकेनन् भने पनि राज्यले दिनुपर्छ भनेर म त्यसमा लागेको हो । त्यो एउटा थालनी थियो । म जहाँ जान्छु, बृद्धभत्ता सुरु गर्ने मान्छे यही हो भनेर बृद्धबृद्धाहरु झुम्मिन्छन् । म अस्ति भर्खरै नुवाकोट गएको थिएँ । मलाई हेर्न धेरै बृद्धबृद्धाहरु आए । त्यसबेला बृद्धभत्ताको विषयलाई लिएर विरोधको पनि सामना गर्नु पर्यो होइन तपाईंको पार्टीले ? हेर्नुस्, अहिले नेपालमा २२ देखि २४ लाख बृद्ध–बृद्धा छन् । त्यसबेला मासिक एकसय रुपैयाँ बृद्धभत्ता दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यौ र सोही अनुसारको बजेट बनायौं । तर, त्यसबेला मलाई काम गर्न खुवै गाह्रो भयो । बृद्ध भत्ताको कार्यक्रम ल्याउँदा कांग्रेसले भन्यो–यत्तिका पैसा कहाँबाट ल्याएर दिने ? ए बाबा, राज्यसँग पैसा नभएको होइन, रज्य चलाउने ब्यक्तिका निजी स्वार्थ पूरा गर्न बजेट दूरुपयोग गर्न पुग्छ तर, असहाय बृद्ध बृद्धालाई एकसय रुपैयाँ भत्ता दिँदा पैसा हुँदैन ? यस्तो पनि हुन्छ ? बिरोधका बीचमै हामीले योजना ल्याएका हौं । बृद्धभत्ताका लागि २५ करोड विनियोजन गर्नुस् नभए मेरो घर बेचेर ल्याउँछु भनेर मैले पनि भनेँ । त्यसरी यो कार्यक्रम ल्याएको हो । विरोध चाहिँ किन गरेको रैछ कांग्रेसले ? हेर्नुस, यो नेपाली काँग्रेस भनेको कस्तो रहेछ भने मेरो अनुभवमा, प्रजातन्त्रको लडाइँमा जनतालाई उपयोग मात्रै गर्ने तर, सत्ता आफ्नो हातमा परेपछि तिनीहरुको विकास उन्नतीमा साथ नदिने गर्दै आयो । जब जब सत्ताको कुरा आउँछ सबैभन्दा पहिला उसैलाई चाहिन्छ । म चारपटक अर्थमन्त्री भएँ । त्यो समयमा अर्थमन्त्री हुँदा सबैभन्दा बढी दुःख दिएको पार्टी नै नेपाली कांग्रेस हो । आफू केही नगर्ने र अर्को पार्टीले गर्यो भने डाह गर्ने अनि सत्ता ढाल्न लाग्ने पार्टी हो नेपाली कांग्रेस । तर म के कुरामा खुसी छु भने छोटो समय भए पनि राम्रो काम गर्न सफल भएको छु । आफैंले चाहिँ आजसम्म बृद्धभत्ता लिएको छैन । सांसद भएवापत पारिश्रमिक आउँछ , श्रीमती पनि रिटायर्ड शिक्षक हुन् । उनी पनि बृद्धभत्ता लिन्नन् ।
बृद्ध बृद्धाकै विषय चाहिँ कसरी दिमागमा आयो त निर्णय गर्ने बेला ? मानिसले भविश्य हेर्नु पर्छ भनेर हो । जोसुकै होस्, भविश्यमा त सबै बूढो हुने हो । उमेर भएका बेला मान्छेले म कहिल्यै बूढो हुन्न कि जस्तो गरी सोच्छ । तर, विस्तारै सबै बूढो हुँदै जान्छन् । तर यहाँ मानिसले भविष्य कहाँ सोच्दछ र ? नेताले पनि सोच्नुपर्ने हो, खोई त तपाइँले देशलाई के दिनुभयो ? युवा विद्यार्धी मजदूरलाई के दिनुभयो ? भन्ने लोकतन्त्र अनि नेताहरुले मात्रै खाने ? त्यसैले एमालेको नौ महिने सरकारले बृद्धभत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको हो । तपाईं आफैं चाहिँ बृद्धभत्ता लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न ? म त्यो बृद्धभत्ता दिने योजना बनाउँदा ५२ बर्षको थिएँ । अहिले म ८० बर्षको छु । एक सय रुपैयाँबाट सुरु गरेको बृद्धभत्ताको कार्यक्रमलाई फेरि एमालेकै सरकारले बढाएर दुई हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । अस्ती भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मासिक दुईहजार पुर्याएर निकै राम्रो काम गर्नु भएको छ । त्यसका लागि म उहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्छु । किनभने मैले ल्याएको योजनालाई सबैले साथ दिदै गएका छन् । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ आजसम्म बृद्धभत्ता लिएको छैन । किनभने मैले सांसद भएवापत पारिश्रमिक लिने गरेको छु । सरकारलाई बुझाउने ट्याक्स् र पार्टीलाइ दिने केही रकम बाहेक मासिक ४० हजार रुपैयाँ पाउँछु । मेरी श्रीमती पनि रिटायर्ड शिक्षक हुन् । उनी पनि बृद्धभत्ता लिन्नन् । हामीले पाउने रकम अरु बृद्धबृद्धाले नै लिउन् भनेर नलिएको हो । म बृद्धबृद्धामा के समस्या देख्छु भने बूढो भए पनि घरको मुली मै हुँ, सम्पति मेरो हो भन्ने अहंमता हुने रहेछ, त्यो हटाउनु पर्छ । बूढो भएपछि तपाईं घरको मालिक होइन अभिभावक हो, मालिक त छोरा वुहारी हो ।
बृद्धबृद्धाले त तपाईलाई खुब मान्दाहुन् होइन ? ओहो यसको त कुरै नगरौं । यस्तो राम्रो भयो कि म जहाँ जान्छु बृद्धभत्ताको कार्यक्रम ल्याउने व्यक्ति यहि हो भन्दै मान्छे झुम्मिन्छन् । सबैले प्रसंशा गर्छन्, धन्यवाद भन्छन्, खुसी हुन्छन् । तर म एउटा कुरामा चाहिँ अचम्मित भएको छु त्यो के भने यत्रो प्रसंशा पाउने काम गरियो । त्यसले पार्टीको इज्जत बढ्यो, सबैले राम्रो भन्ने तर आफनै पार्टी नेकपा एमालेबाट आजसम्म एक बचन पनि जेष्ठ नागरिकको काम राम्रो ल्याउनुभयो भनेर कसैले कुनै नेताले मलाई बधाई दिएका छैनन् । त्यसमा म अचम्ममा पर्छु । म अस्ति भर्खरै नुवाकोट गएको मलाई हेर्न धेरै बृद्धबृद्धाहरु आए । बृद्धावस्थामा पुगेपछि मान्छेका समस्या के हुने रैछन् ? पुस्ताको ग्याप हुन्छ नि, त्यसले ल्याउने मनोवैज्ञानिक समस्याहरु हुन्छन् । मेरो भनाइ के छ भने बृद्ध बृद्धाले पनि समय अनुसार परिर्वतन हुनुपर्छ । घरमा छोरा बुहारी नातिनातिनासँगको व्यवहारमा परिर्वतन गर्नुपर्छ । म बृद्धबृद्धामा के समस्या देख्छु भने बूढो भए पनि घरको मुली मै हुँ सम्पति मेरो हो भन्ने अहंमता हुने रहेछ, त्यो हटाउनु पर्छ । बूढो भएपछि तपाईं घरको मालिक होइन अभिभावक हो । मालिक त छोरा वुहारी हो । समय फेरिएको हुन्छ फेरिएको समय अनुसार काम गर्न छोरा बुहारीलाई दिनु पर्छ । फेरि बूढो भएँ भनेर सबै काम छोडेर बस्ने पनि होइन । आफूले सकुन्जेल सहयोग गर्ने, आफूलाई सक्रिय बनाइराख्नु पर्छ । फेरि छोरा छोरीले पनि मेरो कर्तव्य आमावुवाको सेवा गर्ने हो, उनीहरुसँग मीठो कुरा गर्ने खान दिने विहान वेलुका र विदाको दिन सँगै खाना खाने, कतै रमाइलो गर्न लैजाने गर्नु पर्छ । यसले बृद्धबृद्धा पनि नयाँ परिर्वनसँग अपडेट हुन्छन् । आमाबुबाले पनि बुहारीलाई छोरीजस्तै गर्नुपर्यो आफ्नो उमेरमा आएको परिवर्तनसँगै परिर्वतन भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ । छोराछोरीले पनि मेरो कर्तव्य आमावुवाको सेवा गर्ने हो भन्ने सोच्नु पर्यो । उनीहरुसँग मीठो बोल्ने विहान वेलुका र विदाको दिन सँगै खाना खाने, कतै रमाइलो गर्न लैजाने गर्नु पर्छ । यसले बृद्धबृद्धा पनि नयाँ परिर्वनसँग अपडेट हुन्छन् ।
पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्न, पार्टीले चाहिँ के गरोस् भन्ने लाग्छ ?